Enoch ayaa u dabbaaldegaan | Apg29
Waa sida la Enoog. "Waxaad isaga mar dambe arkay." Waxa uu la waayay oo kaliya iyada oo aan wax raad ah.
Waa sida la Enoog. "Waxaad isaga mar dambe arkay." Waxa uu la waayay oo kaliya iyada oo aan wax raad ah. Sidaasay ahaan doontaa goortii Ciise qoyskiisa dhulka ka retrieves. bidix u dareemi doonto oo keliya in dadku ay si lama filaan ah ugu tagtay.
Wareegi wadaagis la leh Ilaah
Enoch, farcankii toddobaad oo Aadan wuxuu ahaa nin kuwaas oo ku socday weheshiga Ilaaha. Noloshiisu waxay ahayd in wax walba oo ay tahay doonista Rabbiga. Waxaan ka akhriso isaga ku saabsan ee KJV, Cibraaniyada. 11: 5:
"Enoog rumaysad baa loo qaaday si ay si uusan dhimasho u arag, oo helay isagoo mar dambe maxaa yeelay, Ilaah ayaa isaga soo qaaday. Waayo, intaan lagu qabtay, ayaa markhaati loo furay inuu Ilaah ka farxiyey. "
Enoch ma dhiman
Abel kuwa xaqa ah, sida ku xusan aayadda hore la dilay by walaalkiis Qaabiil iyo u dhintay ay Iimaan. Laakiin Enoch ma dhiman oo dhan.
In nuBibeln ayaa sheegay, "ma waxaad ka heli karin isaga," iyo sanadkii 1917 turjumidda: "mar dambena isaga arkay."
Taasi ma aad heli Enoch, ama uu u leeyihiin in ay ka dhigan tahay in iyagoo eegaya isaga, laakiin iyada oo aan guul. Waxa uu ahaa oo ku hadhay maqan.
Marka rayrayn dhacaya, dadkii badnaa oo tirola'aanta ahaa si loo raad raaco baaba'aan dhulka ka. Waa badnaa badbaadada in Ciise ayaa qaaday. Waxaa jiri doona fowdo dhulka. Dad badan ayaa seegi doona qoysaskooda. Kuwii laga tegey Bluagrana ayaa raadin doona kuwa ay jecel yihiin.
Laakiinse iyagu innaba ma ay heli doonaan. Waxayna u dhawaaqi doonaa oo waxaad ku tidhaahdaa, "Xaggee waalidiinta ah? ', Meeshaan waa carruurtayda?", "Halkee walaalahay ah?" Aaway saaxiibaday? "
Dad badan oo aan diyaar u yihiin
Dad badan oo diyaar u ah ma noqon doonto markii rayrayn dhacaa, mana slumbering, anfici Nasaarada. Waxa laga yaabaa in ku fikiray si aan baryadiinna hooyada iyo nolosha xaqa Aabbahay iyaga caawin kara samada. Ama in ay ahayd filan oo ay ku noqon guud ahaan diinta, nooca iyo kuwa wanaagsan oo samayn sida ugu wanaagsan ee ay kari waayeen.
Waxaan ka akhriso in ay ahayd "by Enoog rumaysad baa loo qaaday." Si ay u tagaan la Ciise retrieves qoyskiisa dhulka ka waa in ay leeyihiin iimaan ku nool Masiix. Waa in aad isaga ka helay sida Badbaadiye. Enoogna waxaa u soo gaaray, sababtoo ah wuxuu "ku socday weheshiga Ilaaha," iyo "inuu Ilaah ka farxiyey."
Kitaabku waxa uu ka hadlayaa saddex jireen sodcaalladoodii oo samada, dabbaaldegaan Enoch ayaa, u dabbaaldegaan, Nebi Eliiyaah, oo u dabbaaldegaan of Ciise. Waxaan ka tirsan guutada u furtay sidoo kale samayn doonaa dabbaaldegaan, Ciise na landcruiser dhex rayrayn.